Redmi Rịba ama 8 Pro ga-eme emume ncheta 15 nke World of WarCraft egwuregwu na mbipụta abụọ pere aka | Gam akporosis
Ọ fọdụrụ naanị ụbọchị atọ Ihe ngosi RedN 8 y Ihe ngosi RedN 8 Pro emere gọọmentị site na mmemme mmemme na China. Ekwentị abụọ ndị a ga-abata na ọtụtụ njirimara na nkọwapụta nke anyị ekpughere n'oge na-adịbeghị anya, otu n'ime akụkọ kachasị ọhụrụ nke gbakwunyere ụdị dị iche iche kachasị elu nke nkwa a nwere njikọ nwere igbe dị nta nke a ga-enye ya. ngwaọrụ a, na mgbakwunye na nke oge niile, n'ezie.
A maara Redmi Rịba ama 8 Pro na-abịa na agba abụọ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha. A ga-ekwuputa ọkwa dị iche iche na agba August 29, ma, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-ekwe omume na mgbe e mesịrị na ha ga-anakwere nhọrọ agba ọhụrụ, mana ihe anyị lekwasịrị anya ugbu a metụtara obere mbipụta nke njedebe a, nke ga-abata ime emume ahụ. World of WarCraf 15 afọt, aha e wepụtara na 2004.
Redmi Rịba ama 8 Pro World of Warcraft Limited Edition ga-adị na nsụgharị igbe mkpọsa abụọ. Otu n’ime ndị a nwere igbe na-acha ọbara ọbara na nke ojii, ebe nke ọzọ nwere igbe na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha ọcha. Ọdịnaya nke mbipụta a pere mpe Redmi Rịba ama 8 igbe igbe ka amabeghị. Anyị na-eche na enwere ike ịnwe isiokwu omenala yana akwụkwọ ahụaja nke World nke Warcraft etinyegoro na ngwaọrụ ahụ. O nwedịrị ike ịbụ ikpe omenala.
Banyere ihe anyị ma ama, ụdị abụọ ahụ, ma Redmi Rịba ama 8 na nke anyị na-ekwu maka ya ugbu a na-ebu a quad n'azụ igwefoto na a 64 MP isi ihe mmetụta, igwefoto dị obosara, ihe na-akpali iji jide ozi ubi, na oghere igwe. N'aka nke ya, anyị maara nke ahụ ọkọlọtọ nlereanya ga-eji Qualcomm si Snapdragon 665 processor na na imewe nke ndị a ga-adị ezigbo iche na nke ugbu a Redmi Rịba 7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 8 Pro ga-eme emume ncheta 15 nke World of WarCraft egwuregwu na mbipụta abụọ pere mpe